ILilypad yindawo ezimeleyo, amagumbi amabini okulala, ikhaya leholide elibekwe ngaphakathi kumhlaba wethu e-Esperance. Sikwindawo enoxolo, iihektare ezintlanu eziqhayisa ngeentyatyambo nezilwanyana zaseOstreliya ezimangalisayo. Isanda kulungiswa
ILilypad yindawo ezimeleyo, amagumbi amabini okulala, ikhaya leholide elibekwe ngaphakathi kumhlaba wethu e-Esperance. Sikwindawo enoxolo, iihektare ezintlanu eziqhayisa ngeentyatyambo nezilwanyana zaseOstreliya ezimangalisayo. Isanda kulungiswa kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into oyifunayo ukuze uphumle.
Simi kwi-10km kwimpuma yombindi wedolophu yase-Esperance, ngokufanelekileyo kwindlela eya kwi-Cape Le Grand National Park eyaziwayo kwihlabathi, apho unokufumana khona isanti emhlophe e-Australia.
Sinikezela ngelinen kunye neetawuli ezicocekileyo kutyelelo lwakho kwaye sinokubonelela nge-port-cot kunye nesitulo esikhulu xa usicela.
Siyindawo yokuhlala enobubele kwisilwanyana sasekhaya, esamkela izilwanyana eziziphethe kakuhle. Sinendawo entsha ebiyelweyo ejikeleze umgangatho ukuze uphumle ngepooch yakho! Sinikezela ngenkonzo yokuhlala kwabantwana ukuze ukwazi ukushiya abahlobo bakho abanomsindo kwizandla ezikhuselekileyo ngelixa uhlola ipaki yesizwe yendawo okanye ukonwabele ukuphuma ebusuku.
Sinendawo eninzi kwipropathi yokupaka isithuthi sakho kwaye sinokufaka izikhephe kunye neetreyila onokunqwenela ukuza nazo.
I-Esperance idume ngeelwandle zayo ezintle kwaye uya kuphangwa ukuba uzikhethele. Nokuba ufuna ukuqubha, ukusefa okanye ukuhambahamba, kukho ulwandle lwakho.
Siyavuya ukubonisa iindwendwe zethu ngeenxa zonke-Singakwazi ukukwazisa ukuba ziphi iilwandle ezingcono kunye nendawo elungileyo yokuba nentlanzi okanye utye ngaphandle.